Kubvira ndakadanana ne chimoko changu Tambudzai handina kuzombosvira chimwe chimoko.Tambudzai aive ne beche raitapira se huchi hwezvi
nyunyu.Ndakange ndamubvisa hu mhandara achiri form 6.Taidanana nemwana uyu.Moyo wangu wainge wakaperera murudo.
Baba va Tambu vainge vakashaika saka aigara namai vake avo vaipota vachienda ku joni kuno hodha .Pavaienda joni ndopandaisara ndichiita
madiro ne beche ra Tambu.Mwana uyu aigona kukoira zvake .Beche rake raisambondi bhowa nekuti mmm rainge rakaita kunge rekamwana kari form one.
Ndaiti ndikaiti pfee mboro mubeche ra Tambu hey .Aizunguza magaro eaputa mbanje.Iko kuchemerera ungati ari ku actor porno.Iniwo ndobva
ndaita manyemwe ndairova beche kunge ndakupenga.
Zvakazoitika manje mumwe musi ndadeedzwa naTambu ne Whatsapp ku denhi kwavokwavairoja mai vake vaenda joni.Ndakasvika pa dheni ndobva ndapinda
mumba maTambu.Kwakuri kuma 4pm ndichingosvika ndakabva ndatombosvira zvangu one round.Handina kuziva kuti hanzvadzi yaTambu yairi around.
So Tambu akanditi ndiende mumba ma landlord vake ndinogarako kusvikira hanzvadzi yake yarara.Landlord vaTambu ndandisati ndambovaona
ndaingonzwa Tambu achiti Landlord ishamwari yake but ndandisati ndambovaona.
Aingoti vabereki vake vakafa ndobva asiirwa imba nezvinhu zvese.Plus landlord uyu anga ari chimoko.Akabuda neni kwakuenda neni kwa landlord vake.I was surprised becoz she was of same age as Tambu.Anga ari ka yellow born.Aive nenyemwerero inobudisa tumakomba mumatama.
Ndakapinda mumba ma Landlord ndobva ndagara pasofa riya rogara vanhu two.Landlord vakagara pa sofa remunhu one .Taiona zvedu ZTV kadrama kaya kanonzi Tunga. Takanyarara pasina arikutaura nemumwe sevanhu vavasingazivani.Plus seshamwari yaTambu ndaitya kuzo rashika mukutaura umu.
Landlord vaisekerera vachingoshanyarika vakagara zvavo pasofa ravo.Taingoti patv pakabuda zvosekesa tobva taseka zvedu.But as time
goes on takazongotanga kutaura nyaya dziri general like politics and zvese zviri kungoitika muZimbabwe.Landlord vakatanga ku feeler more
comfortable vaineni kwakutanga kutaurisa.
Landlord vakasimuka kwakuuya kuzogara neni pasofa.But in my mind ndakaona kuti munhu uyu anenge arikutoda zvekusvirwa uyu.Maactions
emunhu arikuda mboro anooneka.Ndakabva ndafambisa ruoko rwangu ndichinobata zamu ra landlord but ndakaona vachiramba vaka chiller
ndikabva ndaziva kuti I was right munhu arikuda mboro uyu.
Ndakabva ndatotanga kubata mazamo zviri soft ndobva ndapinza ruoko mubeche ndikaona landlord havasi kupopota.Ndakabata dinji ndikanzwa
murabaraba. Handina kuda kupedza nguva sezvo landlord vavakutoti “ ndisvire kani baby , Svira hako oooo beche oooo rese svira” Ndakati
regai nditambe faster nekuti ndikadakuita chinono ndinosvikirwa naTambu.
Ndakaradzika landlord nemusana pasofa ipapo handina kuwana tyme yekuvabvisa pant ndakangoka bvisa paburi ndobva ndavhura zipp yangu
kwakuiti mboro nyoro pfeee.Landlord vaive ne beche riya rinonzi chitsoka chemhene.Rainge rine matinji anenge mapapu embudzi.Beche racho raiita kuyamwa mboro.Ndakatanga kukoira zviya zvekuti ndikasire kutunda semunhu aisada kubatwa na Tambu.
Landlord vakatangakundipawo chikapa chakaipa hatina kumbopedza 5 minutes tichisvirana tatotunda kare nekuti taisvirana zvedzungu zviya ,plus landlord vavane ngura saka vakabva vatotunda faster faster.Ndichingopedza kupukuta mboro yanyu Tambu akabva avhura door
.Landlord vavaenda ku bath kunosuka beche.
Tambu haana chaakambofungira , takazobuda zvedu takuenda kuroom kwaTambu kwatakazorara tichisvirana husiku hwese.Mangwana acho ndakanyepera Tambu kuti ndendisipo ini ndandadeedzwa naLandlord kuti huya usvire zvinhu zvako.Ndakushaya wekuroora.Landlord vane zvese Tambu ndakamuvhura beche ndoroora ani ? kusvira ndrikusvira vese zvangu , but kuroora ndoroora ani ndibatsireiwo guys pliz pliz.
Tags: Mboro mubeche